Oke Osimiri Uhie. Muta otu esi eme ya na ihe agba ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke osimiri uhie
Beingsmụ mmadu na-anwa mgbe niile imepụta gburugburu na ebe na-agagharị. Agbanyeghị, okike naanị nwere ike iju anyị anya maka ọdịdị ala yana ihe ịtụnanya dị ịtụnanya. Na nke a, anyị ga-akọwa etu esi akpụ ya Oke Osimiri Uhie. Aha ya bụ n'ihi ihe kpatara na anyị ga-akọwa n'isiokwu a nakwa na sayensị enweela ike idozi. Kemgbe oge ochie a na-eche na oke osimiri a nwere njirimara anwansị n'ihi agba ya na-adịghị mma.
You chọrọ ịma ihe niile gbasara Osimiri Uhie? Nọgide na-agụ ma ị ga-achọpụta.
1 Oke osimiri uhie na njirimara ya
3 Kedu ihe kpatara aha Red Sea
4 Ntughari uche nke igwe
Oke osimiri uhie na njirimara ya
Oke osimiri a di egwu n’Oké Osimiri India. N'etiti kọntinenti nke Eshia na Africa, anyị nwere ike ịhụ oke osimiri a, nsonaazụ nke ihe ịtụnanya. Mpaghara ya ọ dị ihe dịka square kilomita 450.000. Ọ dị ihe dị ka puku kilomita abụọ na narị abụọ n’ogologo na mita 2.200 n’omimi. Edere ebe kachasị mie emi na ihe dị ka mita 500 n'okpuru ala.
Ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri a anaghị agbanwe nke ukwuu n'ihi ọnọdụ gburugburu ebe obibi. A na-ahụta ya oke osimiri kachasị mma n'ụwa ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti ogo 2 na 30. A na-edebanye aha ala dị ala n'oge oyi ma n'oge okpomọkụ ha ruru elu.
O nwere ezigbo salinity n'ihi ogo ya. N'ịbụ ndị na-ekpo ọkụ, ọnụego evaporation nke mmiri dị elu, nke mere na nnu nnu na-abawanye njupụta ya. N’aka nke ozo, ebe o nwere oke mmiri ozuzo pere mpe, onaghi emeghari mmiri, si otua na abawanye nnu nnu.
Ọnọdụ ndị a bụ ihe na-eme ka oke osimiri a nwee anụ ụlọ na ụdị osisi pere mpe, mana ha bụ ndị pụrụ iche. Ihe ndi a bu ahihia oma na umu anumanu emebere mgbe otutu puku otutu ugbua banyere onodu gburugburu ebe obibi. 10% nke azụ niile dị na ụwa na-ebikọ ọnụ n'oké osimiri a ma n'ihi ekele nke mmiri, mmiri coral nwere ike ịmalite nke ọma. Ọtụtụ n’ime ha ha ruru eru iru kilomita 2000. Okpokoro coral nwere nnukwu ihe omumu maka oru nile ha nwere na umu ndi na ekele ha.
Anyị na-ahụkwa ụfọdụ ụdị mbe dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, akpụkpọ anụ na hawksbill na ndị ọzọ nọ n'ihe egwu ịla n'iyi.
Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị ajụọla ajụjụ kemgbe afọ ole e si kee osimiri a. Ozizi nke kacha nwee ihe ịga nke ọma na nke a bụ nke na-egosi na ọ bidoro nde iri ise na ise gara aga mgbe o mere nkewa n'etiti Afrika na ala Arabia. Nke a mere na nguzobe nke Pangea kọntinent ma kọwaa ya kọntinent drift tiori.
Mgbe nkewa ahụ mere, mgbape ahụ nke jupụtara na mmiri karịrị oge. Otú a ka oké osimiri a si malite. Taa, dị ka anyị si ekele ekele efere tectonics, nkewa a ka nọ n'ọrụ, ya mere, oké osimiri ahụ na-aga n'ihu na-eto n'elu ala. N’ihi nke a, oke osimiri ji ihe dịka 12,5 centimeters ebido kwa afọ. Nke a ga - ebute mgbanwe n ’ọnọdụ Oke Osimiri Uhie na, ikekwe mgbe ọtụtụ nde na ọtụtụ nde afọ gasị, nwere ike ibu oké osimiri. Nke a bụ ihe na - abụghị ihe ga - eme n’Oké Osimiri Mediterenian, nke ga - akwụsị n’anya mgbe Strait nke Gibraltar mechiri.
Kedu ihe kpatara aha Red Sea
Obu ihe onye obula choro ima ebe obu na ahonyeghi Osimiri Uhie maka na miri nwere ezi uhie. Aha a sitere na ịdị adị nke ụfọdụ cyanobacterial algae dị n'oké osimiri. O yikarịrị ka algae na cyanobacteria bụ maka ọrụ na-acha uhie uhie nke na-eme n'oké osimiri a. Oke mmiri na-acha uhie uhie na-eme n'ihi ndapụta nke oge na-adị n'akụkụ oke osimiri. Algae a bu ndi na agba mmiri uhie. Ọ bụghị ọbara ọbara dị ka ndị dị otú a, mana ọ na-acha ọbara ọbara. A pụkwara ịhụ ihe ịtụnanya a na mmiri Caribbean.
Achọpụtala na, n'ihi ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke achọtara oké osimiri, ịta ahụhụ nke algae buru ibu buru ibu. N’oge ụfọdụ n’afọ, ha na-aba ụba nke na ha nwere ike ime ka mmiri na-acha ọbara ọbara. Nsogbu a na abia mgbe enwere otutu algae ma ha abia ndi asọmpi. Territorykèala ahụ na ọkụ ezughi iji nye mkpa nke algae niile ma ọ ga-anwụ.
Nke a bụ akụkụ nke usoro ndu nke ụdị ọ bụla na, na nke a, njupụta nke algae na-abawanye ma ọ bụ belata ka oge na-aga. N'oge a kara aka ebe ịta ahụhụ nke algae dị ala, agba adịghị acha ọbara ọbara ma aja aja. Ndi kwere ekwe bu ndi n’eche na Oke Osimiri Uhie esitewo n’akụkọ Moses. Ka mmiri ahụ kewara iji mee ka ndị ya nwere onwe ha ma ndị Ijipt na-achụ ha, mmiri ahụ gbara ọbara ọbara.
Ntughari uche nke igwe
Ozizi ozo banyere mbido aja aja a di egwu bu nke na asi na obu ihe ngosi nke igwe. Ugwu dị n’elu ugwu ndị dị nso n’Oké Osimiri Uhie na-acha ọbara ọbara na ihe a pụrụ ịhụ na mmiri ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụ ma ọ bụghị ngosipụta nke mbara igwe na ugwu ndị gbara ya gburugburu. Nkwupụta a ga-akọwa ihe a nke ọma ebe Ugwu Saịnaị dị n'akụkụ Oké Osimiri Uhie ma na-acha ọbara ọbara na-acha n'ihi mineral ígwè ya. A na-akpọkwa ugwu ndị a ruby ​​ugwu.
N’isi ụtụtụ ụzarị ụzarị anyanwụ na-eme n’elu ugwu na-eme ka agba ọbara ọbara na-acha na mmiri. Ọ nwere ike ịbụ nkọwa na ya. Agbanyeghị, enwere ndị na-eche na ụzarị ọkụ na-erute anyị site n'ehihie nwere ike ịkọwa agba dị na mmiri.
Onwe m, echere m na tiori cyanobacteria na algae bụ ihe kachasị egosi, ebe ọbara ndị Ijipt gbawara agbawa agaghị adị na mmiri mgbe niile n'ihi na ọ ga-apụ ọtụtụ afọ ma gosipụta ugwu na mbara igwe ga-adabere awa nke ụbọchị. Oké Osimiri Uhie na-acha mgbe niile n'otu ụzọ ahụ, ọ na-adị iche na oge nke afọ, nke dabara na ya tiori nke cyanobacteria na algae uhie.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke osimiri a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Oke osimiri uhie
Oge ọkọchị nke San Martín